Fanafihana hafanana amin'ny alikaola miaraka amin'ny fanaraha-maso ny hafanana  Contact Now
Toeram-pandrefesana karbenina karpony  Contact Now
Ny UL dia misy lisitra fanairana fantson-drano ho an'ny mpanadio akoholahy  Contact Now
Reptile Heating Pad PetcoHeat Mat sy thermostat  Contact Now
16 Watt Reptile / Amphibian Heat Pad for Animals  Contact Now
Shenzhen Xinghongchang Electric Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 1996, dia mpamokatra singa matihanina manafana toerana misy azy ao Huizhou. Miaraka amin'ny traikefa nandritra ny 22 taona mahery tamin'ny famokarana singa fanafanana, dia niasa manokana tamin'ny sehatry ny sarimihetsika fanafanana...
Shenzhen Xinghongchang Electric Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 1996, mpanamboatra singa matihanina matihanina izay misy ao Huizhou. Miaraka amin'ny traikefa nandritra ny 22 taona mahery tamin'ny famokarana singa fanamafisana, dia niasa manokana tamin'ny sehatry ny sarimihetsika fanafanana tsy...
Fanafihana hafanana amin'ny alikaola miaraka amin'ny fanaraha-maso ny hafanana
Mombamomba ny vokatra Ny hafanana amin'ny alikaola amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny hafanana dia feno rano mahery, mahafinaritra. Afaka miondrika, mora soloina ny madio madio. Atambatra ny kofehy herinaratra, fisorohana ny fikorontanan'ny biby na hisintona. No vokatra azo antoka indrindra amin'ny...
Vidin'ny singa: USD 12 - 16 / Set/Sets
Manomeza fitomboana azo antoka sy haingana kokoa, manafana hatrany ny fakan'ny zavamaniry, hampiroborobo ny fitomboan'ny zavamaniry ao anaty tontolo mafana, manomeza zavamaniry manana mari-pana mety tsara, hampiroborobo ny fananganana fambolena sy ny fambolena voa, mijoroa ho madio sy tsy mipetaka ny...
Product Advantages: 1. Tempoly manodidina 10 ℉ -20 ℉ noho ny mari-pana amin'ny rivotra iainana; afaka miaina amin'ny ambany tontolo manodidina. 2. Hafanana hafanana mahomby - Fahavetavetan'ny hafanam-po manampy amin'ny fitandroana ny hafanana voajanahary, tsy misy dikany Fanafody fantsona fototra...
Fampiasana fitaovam-pamokarana mediam-panafody Hafatra hafanana ho an'ny orinasa mpitrandraka harena an-dranomasina Power Saving PTC Heat Mat For Seeds Seeding Heat Mat Amazon Product Advantages: 1. Tempoly manodidina 10 ℉ -20 ℉ noho ny mari-pana amin'ny rivotra iainana; afaka miaina amin'ny ambany tontolo...
Vidin'ny singa: USD 13.6 - 16 / Set/Sets
Fananganana toeram-pivarotan-jiro tsy azo hivalozana mahazatra Product Advantages: 1. Tempoly manodidina 10 ℉ -20 ℉ noho ny mari-pana amin'ny rivotra iainana; afaka miaina amin'ny ambany tontolo manodidina. 2. Hafanana hafanana mahomby - Fahavetavetan'ny hafanam-po manampy amin'ny fitandroana ny...
Fametrahana boaty famoahana fampandehanana famokarana; Afaka miaina amin'ny -20 degre kavity: 24 Material: Base ABS Dome PET Tray: PS Mombamomba ny vokatra Mamokatra masomboly manatsara ny fikajiana. Ny ankamaroan'ny voany dia maniry tsara ny tany mba hahazoana mangiran-drano tsara indrindra. Ireo tsiranoka...
Famolavolana tetik'ady fanaovan-jiro marobe matséed Hezeti-paty Nz Seedling Heat PadLarge Seedling Heat Mat Product Advantages: 1. Tempoly manodidina 10 ℉ -20 ℉ noho ny mari-pana amin'ny rivotra iainana; afaka miaina amin'ny ambany tontolo manodidina. 2. Hafanana hafanana mahomby - Fahavetavetan'ny...
Famolavolan'ny hafanana amin'ny fonosana fampielezan-tsolosaina Fampiroboroboana Hafatra fanaovan-tsolika ho an'ny varotra Voaantom-panafody Toeram-ponenana Depot Seedling Heat Mat amin'ny tranom-pivarotam-panafody Product Advantages: 1. Tempoly manodidina 10 ℉ -20 ℉ noho ny mari-pana amin'ny...
Famolavolana ny hafanana Mat amin'ny ThermostatPropagation Heating PadSeed Heat Mat LowesSeedling Heat Mat amin'ny ThermostatPropagation Heat Pad Product Advantages: 1. Tempoly manodidina 10 ℉ -20 ℉ noho ny mari-pana amin'ny rivotra iainana; afaka miaina amin'ny ambany tontolo manodidina. 2. Hafanana...
Mombamomba ny vokatra Safe Waterproof Heating Pad ho an'ny Reptiles Amazon Hot Sales Matematika Mat Ao ambanin'ny fantson-drano na fantson-drano dia fomba lehibe hanomezana "hafanana kibo" ho an'ireo karazam-borona tropikaly na tany efitra. Kitapo marevaka sy mihodinkodina amin'ny fametrahana...
Mombamomba ny vokatra Under Tank Heating Mat Heat Infrared Carbon Heater Mat for Reptile Fanamboaran-tory Mat under Tank Tanka 8W Reptile with British Plug for Turtles Ao ambanin'ny fantson-drano na fantson-drano dia fomba lehibe hanomezana "hafanana kibo" ho an'ireo karazam-borona tropikaly na tany...
Mombamomba ny vokatra Under Tank Heating Mat Heat Infrared Carbon Heater Mat for Reptile APPLICATIONS: Tena ilaina amin'ny fampiasana amin'ny reptile, zipo, amphibia, biby kely na zavamaniry. Mahavariana ihany koa ny fambolena, ny homebrewing, na ny teatra Kombucha SPECIFICATIONS: habaka maro, 120 volts, 4...
Mombamomba ny vokatra 4 "x7" 4W Reptiles Heat Pad eo ambanin'ny tank Terrarium Fanaterana fitaovana ho an'ny biby kely PTC Heat Pad miaraka amin'ny Taratasy Infrared Farany amin'ny Reptile Heat Pad 20 Gallon Infrared Heating Principle: Fanamafisana ny saofera amin'ny hafanana dia azo...
Reptile Heating Pad PetcoHeat Mat sy thermostat
Mombamomba ny vokatra Power Saving eo ambanin'ny fanaterana tanka 12V Aquater Heater automatique automatique heater HEATER UNIFORM: Ny sarimihetsika fanalefahana vaovao sy ny fisitrihana dia mampitombo ny famerenam-panafody amin'ny fomba samihafa manerana ny mat. Miangavy ny mari-pamantarana tianao ao...
Product Specification Base material: PVC habaka: 200 * 300MM, maody maimaim-poana Fahaverezana: 16W , azo ampiasaina tsipika: 120v, voatokana azo max temperature: 42 ℃ loko: mainty, maody maimaim-poana potoana: 30 andro Description: pilotra famelarana hafanana ho an'ny fitomboan'ny zavamaniry sy ny hafanana...